::ဓ မ္မ စ ကား နေ့ တိုင်း ကြားက၊ စိတ် ထား ဖွေး လက် သိ ဥာဏ် ထက် ၏::: August 2007
Q: Anata(wa)/~san nani ni simasu ka. (* Anata ကသိပ်တော့မယဉ်ကျေးဘူး)
A: Watashi (wa) koohi ni simasu/desu.
B: Watashi mo onazi desu.
ကျနော်/ကျမ လည်းသူနဲ့အတူတူပါဘဲ။ သူ့လိုပါဘဲ။
kootya - လ္ဘက်ရည်
yaki soba -ခေါက်ဆွဲကြော်
yaki mesi(tyahan) - ထမင်းကြော်
yaki tori - ကြက်ကြော်
yaki zakana - ငါးကြော်/ငါးကင်
yaki bihun -ကြာဇံကြော်
kare raisu - ထမင်း+ဟင်း
Posted by ယူဆဂိ at Friday, August 31, 20070comment
Posted by ယူဆဂိ at Thursday, August 30, 20074comment
(အဲ ! ဘာဆက်ရေးရမှန်းမသိတော့ဘူး)
Posted by ယူဆဂိ at Wednesday, August 29, 20076comment
နွေ၊ မိုး ၊ ဆောင်း သုံးရာသီ တွင် ဆဂိ အနှစ်သက်ဆုံး ရာသီသည် ဆောင်းရာသီဖြစ်ပါသည်။
ငယ်ငယ်က ဆောင်း အကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်...
မနက်အိပ်ယာထလျှင် စောင်(ဂွမ်းကပ်ဟုခေါ်ကြသည်)ထဲကမထွက်ချင်ပါ။ စောင်ခေါင်းမြီးခြုံမအိပ်တတ်ပါသဖြင့် ပါးကလေးများ အမြဲလိုလိုအေးနေတတ်၏။
အိပ်ယာထဲမှ မထချင်ပေမယ့် ကျောင်းတက်ရမည့် တာဝန် ကရှိနေပါသောကြောင့် ထခဲ့ရပါသည်။
ခပ်ချောချော ပုတက်တက် ကောင်မလေး ယူဆဂိ သည် အနွေးထည်တွေအထပ်ထပ်ဝတ်ထားသည့် အတွက် ၀တုတ်တုတ်လေးလို့ထင်ရလောက်သပေါ့-
မနက်စောစော ကျောင်းသွားတော့မည်ဆိုပါလျှင် ည၀တ်အိပ်ထားတဲ့ည၀တ်အကျီကို လဲရမှာ အန်မတင်ကြောက်ခဲ့ရပါသည်။ ချမ်းတာကိုး..အရမ်းချမ်းတာ။
သိုးမွေး ဆွယ်တာ ၊ သကလပ်အကျီ(သို့တည်းမဟုတ်) သားမွေးအကျီ အထပ်ထပ်ဝတ်ထားသော ကျောင်းသူလေးသည် ကျောင်းဝတ်စုံအဖြူပင်မမြင်ရပေတကား.
(တခါတလေ တကယ် ကျောင်းဖြူမ၀တ်သွားဘူး.. ချမ်းလို့...ရှုးတိုးတိုး ဆရာမကိုမတိုင်နဲ့နော်.)
လက်အိတ်၊ ခြေအိတ်၊ သိုးမွေးဦးထုပ် စသည့် ချပ်ဝတ်တန်ဆာများဝတ်ဆင်ပြီးသကာလ ကျောင်းတက်ခဲ့ရသည့်ဘ၀လေးကို သတိရမိပါသည်။
ကျောင်းရောက်လျှင် လက်အိပ်နှင့်စာရေးရသည်မှာ အဆင်မချောပါသောကြောင့် မချွတ်ချင်ပေမယ့် ချွတ်ရပါသည်။
စာမရေးမီ လက်နှစ်ဖက်ကို ပူလာအောင် ပွတ်ရပါသည်။ သူငယ်ချင်းအချင်းချင်း လက်အေးကြီးနှင့်လိုက်ကပ်ခဲ့ကြသည်။
လက်တွေထုံခဲနေပါသဖြင့် အလွန်လှပသောလက်ရေးများ သည် မနက်စောစောပိုင်းအချိန်များတွင် ပဲပင်ပေါက်လမ်းကြိတ်စက်တက်နင်းခံထားရသကဲ့သို့ တွန့်လိမ်ကောက်ကွေးနှေးကွေးရပါသည်...
၉ နာရီ ၁၀ နာရီလောက်တွင်ဖြင့် နေရောင်အရှိန်ဖြင့် ပူနွေးခြင်းစတင်လာပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် ၀တ်ထားသောအနွေးထည် အချို့ ချွတ်၍ရပါပြီ။
ဆောင်းတွင်းအခါသမယတွင် တိမ်ကင်းစင်ပြီး ပြာလွင်နေတတ်သော ကောင်းကင်ကြီးကို ခဏခဏမော့ကြည့်ရခြင်းအားအလွန်နှစ်သက်ပါသည်...
မနက်ခင်းစောစော နှင့် ညနေစောင်းတွင် ဖိုထားလေ့ရှိသော မီးလင်းဖို လေးကိုလည်းအမှတ်ရမိသည်။
မိသားစု မီးလင်းဖို လေးတွင်စုထိုင်ကာ လက်တစ်စုံ စီသည်မီးဖို ဆီသို့ တိုးဝှေ့ ကာ အနွေးဓါတ်ကို ယူခဲ့ကြဖူးသည်။ ဒါကို မီးလှုံ တယ်လို့ခေါ်ပါသည်။
ကော်ဖီဆိုတာကို ထိုအချိန်ကတည်းက မီးလင်းဖိုဘေးတွင် သောက်တတ်ခဲ့ရင်း စွဲသွားခဲ့သည်ထင်ပါသည်။
ငယ်ငယ်က စားခဲ့ရသော ပေါက်ဆီကြော်ကို မဆီမဆိုင်သတိရမိသဖြင့် အမှတ်တရ ထည့်ရေးလိုက်မိသည်။
ယူဆဂိ အား သတိတရ တက် ကြသည့် ကိုအဉ္ဇလီ နဲ့ စိုင်းစိုင်း အားကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်-
သူတို့သည် တစ်မြို့တည်းသားတွေဖြစ်ပါသဖြင့် တက် လိုက်ရပါသည်-
Posted by ယူဆဂိ at Wednesday, August 29, 20074comment
Posted by ယူဆဂိ at Wednesday, August 29, 20070comment
မည်းနက်ပျော့ပြောင်းခဲ့တဲ့ ငါ့ဆံနွယ်တွေ ..
စီစီရီရီ လှပခိုင်မာခဲ့သော ငါ့သွားများ..
အတ္တ မာန ဒေါသ တွေနဲ့ငါ့စိတ်
Posted by ယူဆဂိ at Monday, August 27, 20072comment
Posted by ယူဆဂိ at Monday, August 27, 20070comment
ကလေးဘ၀က အပြစ်ကင်းစွာ ရယ်မောခဲ့ပြီးနောက်
တခါတရံ တွင်တော့ ပျော်ရွင်ခြင်း ဆိုသည်ကို ခံစားဖူးသလိုလို ၀ိုးတ၀ါး...
ဒါဟာ တကယ်တော့ သတ်ပုံမှားနေတဲ့ ဘ၀ လို့သာ ကောက်ချက်ချလိုက်ပါတော့မည်။
Posted by ယူဆဂိ at Friday, August 24, 20070comment
Posted by ယူဆဂိ at Friday, August 24, 20073comment
အဲ - မမျှော်လင့်တော့ပါဘူး ဆိုတဲ့အခါမှာတော့
သင့်ရဲ့  Formula & Theories တွေကို သိခွင့်ရမလား?
လူတွေရဲ့ ပဥာတ်ချက်တွေ နဲ့
လောကဓံ လို့လူတွေပြောကြတဲ့ သင့်ရဲ့  လှည့်ကွက်တွေထဲမှာ ငါဟာ အလူးအလဲပါဘဲ-
သင်ပေးချင်တဲ့ဘ၀ က ငါလိုချင်တဲ့ဘ၀ နဲ့ အတော်များလွဲနေလို့လား.
သင့်ကို ငါအများကြီးမတောင်းဆိုခဲ့ဖူး ဘူးဆိုတာ သင်သိမှာပါ-
Posted by ယူဆဂိ at Thursday, August 23, 20070comment
သူမဘ၀တွင်ပိုင်ဆိုင်မှုဘာမှမရှိ- သို့သော်သူမဘ၀တွင် ပူးကလေးနှစ်ကောင်ရှိလေသည်။
တစ်ကောင်သည် သူမကိုယ်တိုင်မွေးထားသောပူးကလေးဖြစ်ပေသည်။ နောက်ထပ်ပူးတစ်ကောင်သည် သူမဘ၀ထဲသို့ အမှတ်မထင် ရုတ်တရက်ရောက်လာရင်းမှ သူမလွန်စွာသံယောဇဉ်ဖြစ်သွားရသောပူးလေးဖြစ်သည်။ သူမ ဤသို့ပြောသည်.. -ထိုပူးလေးနှစ်ကောင်သည်သာလျှင် သူမဘ၀ဖြစ်သည်ဟုဆိုလျှင် မည်သူမှယုံနိုင်ကြမည်မဟုတ်။ -သူမဘ၀တွင် သူမအတွယ်တာရဆုံးမှာ ထိုပူးလေးနှစ်ကောင်သာဖြစ်သည်။
-သူမဘ၀၏ စိတ်ပျော်ရွှင်မှုများကို ထိုပူးလေးနှစ်ကောင်မှ သူမအား ပေးသနားခဲ့သည်။
-သူမ၏ ရှင်သန်ခြင်းအား ထိုပူးလေးနှစ်ကောင်ထံမှရရှိသည်ဟု ဆိုသည်။
ထို့ကြောင့် သူမ ဆက်လက်ရှင်သန်နေပေသည်...
-ထိုပူးလေးနှစ်ကောင်သည် စကားအလွန်များသည်ဟု လည်း သူမ ပြောသည်။
သေချာတာတစ်ခုကတော့ သူမ သည်ထိုပူးနှစ်ကောင်ကို အလွန်ချစ်ပါသည်တဲ့..
သူမသည် ထိုပူးလေးနှစ်ကောင် နှင့် နာကျင်စွာ ခွဲခွာရမည် ဟု လောကကြီးက စီရင်ချက်ချထားသည်။ ရွေးချယ်ခွင့်မရှိသောဘ၀တစ်ခုအတွက်
သို့ဖြစ်ပါသောကြောင့်... သင်သည်လည်းကိုယ်ချစ်ခင်ရသောသူများနှင့်ခွဲခွာခဲ့ရဖူးလျှင်.သူမအား အားပေးစကားလေးတစ်ခုခုပြောရန် သူမမျှော်လင့်နေပါသည်။ \_
Posted by ယူဆဂိ at Thursday, August 23, 2007 1 comment
Monday = getu yoobi
Tuesday = ka yoobi
Wednesday= sui yoobi
Friday = kin yoobi
Saturday = do yoobi
Sunday = niti yoobi
Q: Kyoo wa nan yoobi desu ka. (ဒီနေ့ဘာနေ့ဖြစ်ပါသလဲ)
A: Kyoo wa (Day) desu.
Posted by ယူဆဂိ at Wednesday, August 22, 20070comment
philanthropist - လူ့လောကကောင်းကျိုးဆောင်သူ
misanthrope - လူအားလုံးကိုမုန်းသူ/မယုံသူ
fugitive - ၀ါးရမ်းပြေး
arsonist - ရပ်ရွာမီးရှို့သူ
kleptomaniac - မခိုးရမနေနိုင်သူ
amateur - အပျော်တမ်းလုပ်ဆောင်သူ
teetotaler - အရက်ရှောင်သူ
cannibal - လူသားစားသူ
epicure gourmand - အစားအသောက်မက်မောသူ
hypocrite - ကြောင်သူတော်
imposter - အယောင်ဆောင်သူ
charlatan quack- ဆရာတု။ ဆရာယောင်
misogamist - အိမ်ထောင်ရေးကိုမုန်းသူ
misogynist - မိန်းမမုန်းသူ
(သိပြီးသားသူများအတွက်မရည်ရွယ်ပါ. မသိသေးသောသူများအတွက် Just Knowledge Sharing)
Posted by ယူဆဂိ at Tuesday, August 21, 20070comment
ထိုအရာကို Coffee ဟုခေါ်သည်!
Posted by ယူဆဂိ at Monday, August 20, 20073comment
Labels: ကော်ဖီ အမှတ်တရ
naing နဲ့ tzm တက်ထားလို့သာရေးရတာပါ..တကယ်တော့ သူများလိုလည်း own tune စာတွေ ကဗျာတွေရေးထားတာမရှိလေတော့..ခက်သား။ ဒါနဲ့ အတင်းရှာလိုက်တာမှာ.. တင်ထားသမျှထဲမှာ ကြိုက်တဲ့ပိုစ်တွေကအများကြီးကိုထွက်လာတာ..စစ်ထုတ်လိုက်တော့
အားလုံးပေါင်း ၁၂ ခုလောက်ထွက်လာတယ်လေ။ ဒါတောင် လျှော့ထားတာ.
အင်း..၁၂ ခုထဲက ၅ ခု ထပ်စစ်ထုတ်ရမယ်ဆိုတော့.. ချန်ထားခဲ့ရမဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတွေကိုအားနာပေမယ့်..ဒီခေါင်းစဉ်လေးတွေရွေးထုတ်လိုက်ရပါတယ်
၂.အထီး ကျန် ရင် အ ကျည်း တန် တယ်
၃.အသေကြီး နဲ့ အသေလေး
မှတ်ချက်။ ။ ဒီခေါင်းစဉ်လေးတွေအပြင် ပိုစ့်တွေထဲက အခြားကြိုက်တဲ့ပိုစ့်ခေါင်းစဉ်လေးတွေရှိခဲ့ရင် comment ထဲမှာရေးပေးသွားပါလို့ ပြောပါရစေ။ သိချင်လို့ပါ။ လိုအပ်ချက်တွေရှိရင် နောင်များပြင်ဆင်နိုင်အောင်ပါ။
I need your prompt comments for me.
Posted by ယူဆဂိ at Saturday, August 18, 20072comment
*love & Marriage*
The student went to the field, go thru first row, he saw one big padi, but
he wonders....may be there isabigger one later. Then he saw another
bigger one... but may be there isaeven bigger one waiting for him.
Later, when he finished more than half of the padi field, he start to
realize that the padi is not as big as the previous one he saw, he know he
has missed the biggest one, and he regretted !!!! So, he ended up went back
to the teacher with empty hand.
The teacher told him, "...this is love... you keep looking forabetter
one, but when later you realize, you have already miss the person...."
"The student went to the corn field, this time he is careful not to repeat
one that is just nice, and you have faith and believe this is the best one
you get.... this is marriage."
ရုံးကလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက် က Mail Forward လုပ်လိုက်တာလေးကို original အတိုင်းတင်လိုက်တာပါ. အခြားဘလောက်တစ်ခုခုမှာတင်ပြီးသားများဖြစ်နေရင်..လက်တို့ပြီးပြောခဲ့ပါ..။
Posted by ယူဆဂိ at Wednesday, August 15, 20070comment
A Prey of Between Payable & Receivable
Posted by ယူဆဂိ at Tuesday, August 14, 20070comment
အချိန်ယူတဲ့အတွက် တန်ဖိုးရှိတာတွေ ဘာမှဆုံးရှုံးမသွားဘူး။
မှတ်ချက်။ ။ ငယ်ငယ်တုန်းကဖတ်ဖူးတဲ့ စိတ်မှာအလိုလိုစွဲနေတဲ့ အဆိုလေးတွေပါ။ ဘယ်သူ့အဆို လည်းဆိုတာတော့မမှတ်မိတော့ပါဘူး။
Posted by ယူဆဂိ at Tuesday, August 14, 20072comment
ကိုယ်ပေးလိုက်တဲ့နာမည်နဲ့ link လေးတစ်ခုရလာတော့ ပျော်သွားတယ်။
နောက်တော့..ကိုယ့်ဘလောက်လေးကအကျိုးရှိတဲ့ဘလောက်လေးဖြစ်စေချင်တဲ့စိတ်နဲ့ဓမ္မအကြောင်း လေးတွေဖတ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေထဲက ကိုယ်ကြိုက်တာလေးတွေရိုက်တင်ပေးတယ်။
သူများတွေလိုကိုယ်ပိုင်စာ..ကိုယ်ပိုင်ကဗျာတွေလုံးဝမရေးတတ်ဘူးလေ။အလုပ်ကလည်းတစ်ဖက်ဆိုတော့ ဘလောက်တွေကိုသိပ်မလည်ဖြစ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ဆီလာလည်တဲ့သူ နဲ့ ကိုယ် လင့်(ခ) ထားတဲ့ဘလောက်ဆီ လောက်ခပ်ကျဲကျဲလည် ဖြစ်တယ်။
ဒီလိုနဲ့ ဓမ္မစကားလေးတွေလက်လှမ်းမှီသလောက်ရိုက်တင်ရင်း.. ကိုယ် မတောက်တခေါက်တတ်တဲ့ ဂျပန်စာ လေးအနည်းအကျဉ်းကို မှတ်စု စာအုပ်ထဲက တဆင့် ဘလောက်ပေါ်ကို ရိုက်တင်ပေးဖြစ်ခဲ့တယ်။
အခု ဆဂိ ပြန်စဉ်းစားမိနေတာက ဘလောက်ဆိုတာ...အများအတွက်လား.၊ ဘလောက်ဆိုတာ ငါ့အတွက်လား..။
ကိုယ်တင်နေတဲ့ပို့စ်တွေနဲ့ ကိုယ့်ခေါင်းစဉ်နဲ့ လိုက်ဖက်မှုကောရှိသေးရဲ့လားလို့လည်းစဉ်းစားမိပါရဲ့..
Posted by ယူဆဂိ at Friday, August 10, 20070comment
ကဗျာလေးရဲ့ ခေါင်းစဉ် က "မသိခြင်းများ"
ဒီကဗျာလေးက အပြည့်အစုံမဟုတ်ပါဘူး..။အပြည့်အစုံဖတ်လိုပါက..မမေ ဘလောက်တွင်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
ကူးယူခွင့်ပေးသော မမေ အားကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
နှလုံးသား ခံစားချက်ကို စာရွက်တစ်ခုမှာ ချပြဖို့အတွက်....
ငါဒါကိုမရေးမီ၊ ရှေ့မှာ စာလိုလို ကဗျာလိုလို ၂ ခုရေးခဲ့တယ်။
စိတ်တိုင်းမကျလို့ ပြန်ပြီးဖျက်ခဲ့ရတာ တစ်ဝက်ကျိုးနေတဲ့အချိန်မှာပဲ။
ဖော်ထုတ်ဖို့အတွက် ကလောက်တစ်ချောင်းလောက် ပေးသနားပါလို့
ငါ့နှုတ်က တောင်းဆိုမှုတွေမထွက်ခဲ့တာ ဘာကြောင့်ပါလည်း။
ကဗျာရေးသူ။ ။ မဘာညာ
ကြိုက်လွန်းလို့ ခွင့်တောင်းပြီးကူးထားလိုက်တာပါ။ ကူးယူခွင့်ပေးသော မဘာညာအားကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Posted by ယူဆဂိ at Wednesday, August 08, 20070comment
သာမန်သူငယ်ချင်း နဲ့ အစစ်အမှန်သူငယ်ချင်း
သာမန်သူငယ်ချင်းနဲ့ အစစ်အမှန် သူငယ်ချင်းတွေ ကိုယ့်မှာ ဘယ်နှစ်ယောက်
ရှိလဲ ....ကိုယ်ကရော သူတို့အတွက် ဘယ်လို သူငယ်ချင်းမျိုးလဲ .....?
အစစ်အမှန် သူငယ်ချင်းတယောက်က သင်ငိုဖို့အတွက် သူ့ပုခုံးကို ပေးဌားတယ်။
အစစ်အမှန် သူငယ်ချင်းတယောက်က သင့်မိဘ ဖုန်းနံပါတ်ကို သူ့စာအုပ်မှာကူးထားတတ်တယ်။
အစစ်အမှန် သူငယ်ချင်းတယောက်က သင့်ပါတီ မစခင်ကတည်းက လာကူပြီးပွဲပြီးမှ ပြန်တတ်တယ်။
အစစ်အမှန် သူငယ်ချင်းတယောက်က သင့်အိမ်လာလည်ရင် ရေခဲ သေတ္တာကို သူကိုယ်တိုင် ဖွင့်မယ်။
သာမန် သူငယ်ချင်းတယောက်က သင်နဲ့ ကတောက်ကဆတ်ဖြစ်ပြီးရင် သူငယ်ချင်းအဖြစ်ကနေ ရပ်စဲမယ်။
အစစ်အမှန် သူငယ်ချင်းတယောက်က သင်နဲ့ ကတောက်ကဆတ်မဖြစ်ရင်သူငယ်ချင်း မစစ်ဘူးလို့ ထင်မယ်။
တခြားလူ မသိသော ကိုယ်၏လျှို့ဝှက်ချက်များကို သူသိသည်။ ကိုယ်စာမရ
သောအချိန်တွင် ရှင်းပြတတ်ပြီး ကိုယ်အမှား လုပ်မိသောအချိန်တွင် ကိုယ့်
ဘက်မှရပ်တည်ပြီး ၀န်ခံပေးတတ်သည်။ အားငယ်သောအချိန်တွင် အားပေး
တတ်ပြီး ၀မ်းနည်းနေသည့် အချိန်များတွင် နှစ်သိမ့်တတ်သည်။ ကိုယ်အဆင်
ပြေလျှင် သူ့ကိုမေ့နေတတ်ပြီး အဆင်မပြေသောအချိန်များတွင် ကိုယ့်ရင်ဖွင့်
သမျှကို စိတ်ရှည်ရှည်ဖြင့် နားထောင်ပေးတတ်သည်။ ကိုယ်နှင့်အတူ ရှိနေမည့်
အချိန်များက ချစ်သူတစ်ယောက်ထက်ပင် ကြာရှည်ခိုင်မြဲတတ်သည်။
ထိုလူမျိုးကို သူငယ်ချင်း ဟုခေါ်သည်။
မှတ်ချက်။ ။ ဒီpost ကိုမတင်ခင် မနိုင်းနိုင်း အားခွင့်မတောင်းမိပါသဖြင့် အနူးအညွတ်တောင်းပန်အပ်ပါတယ်။ ယခု မနိုင်းနိုင်း ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် တင်ထားလိုက်ပါသည်။
မေးလ်အဟောင်းလေးတွေပြန်လှန်ရင်း သူငယ်ချင်းပို့ထားတာလေးတွေ့လို့ အမှတ်တရတင်လိုက်မိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Posted by ယူဆဂိ at Wednesday, August 08, 20072comment
"Love is only for loving"
ဒီစကားလေးကိုစကြားဖူးတုန်းက စိတ်ထဲမှာ သိပ်အလေးအနက်နားမလည်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်
အခု..ဒီစကားက အလွန်အဓိပါယ်ရှိနေတယ်လို့ခံစားရလို့ အမှတ်တရတင်လိုက်တာပါ
Posted by ယူဆဂိ at Tuesday, August 07, 20070comment
မှတ်ပါ.. သြော် ဒုက္ခ
စဉ်းစားထားသမျှ အတွေးများ ပျောက်ပျက်သွား
Posted by ယူဆဂိ at Saturday, August 04, 20070comment
၁ = iti(အိချိ)
၂ = ni(နိ)
၃ = san(စန်း)
၄ = yon(ယွန်း)
၅ = go(ဂေါ့)
၆ = roku(ရောကု)
၇ = siti/nana(ရှိချိ/ နာနာ့)
၈ = hati (ဟချိ)
၉ = kyuu(ကရူး)
Posted by ယူဆဂိ at Friday, August 03, 20072comment
ဘာလိုလိုနဲု့သြဂုတ် ၃ ရောက်သွားပြန်ပြီ။
ဇူလိုင်လတစ်လလုံး ပို့စ် ၃ ခုတင်ပြီး ဆက်မတင်ဖြစ်လိုက်တာ..ယခု သြဂုတ် လ ရဲ့ တတိယမြောက်ပို့စ်ကို
တင်ဖို့. ရေးလိုက်ပါတယ်။ link လုပ်ထားတဲ့ ဘလောက်တွေမနေ့တစ်နေ့ကမှ ၀င်ပြီးနည်းနည်းဖတ်. cbox လေးမှာဝင်ပြောနဲ့အိမ်လည်(ဘလောက်လည်)ဖြစ်သွားတယ်။ တင်မယ်ဆိုရင်.တင်စရာတွေရှိနေပေမယ့်လည်း
စိတ်ကလည်းမအား..လူကလည်းမအား..ကွန်နက်ရှင်ကလည်းမကောင်း နဲ့ ဘာမှမရေးဖြစ်ပါဘူး။
ဟိုအရင်ကဆို..ကိုယ့်အနားမှာရှိတဲ့သူငယ်ချင်းကို စိတ်ထဲရှိသမျှရင်ဖွင့်(အီးမေလ်ပို့တာပြောပါတယ်) လို့ရပေမယ့်၊ ခုတော့သူလည်းသူ့ဒုတ်နဲ့သူအနားမှာမရှိတော့ မနေတတ်မထိုင်တတ်ကိုဖြစ်နေရော။
အရင်ကဆို..ကိုယ်ကလည်း သူ့ဆီ အီးမေလ် နေ့တိုင်းပို့သလို. သူကလည်းမပြန်တဲ့နေ့မရှိသလောက်။
အခုတော့ ကိုယ့် inbox ထဲမှာမေးလ်အသစ်တစ်စောင်တောင်မရှိ။
ဂျီတော့ကလေ- connecting.../retry ဘ၀ကနေ အခုတလော singing in ဖြစ်ဖြစ်လာတယ်
မီဘူး ကလည်း- network interrupt မဖြစ်သလောက်
Posted by ယူဆဂိ at Friday, August 03, 20070comment
Labels:်dedicated to my friend
Posted by ယူဆဂိ at Thursday, August 02, 20070comment
Labels: Dedicated to my Essential Friend
သင်သည် အခန်းတစ်ခုထဲတွင်ရှိနေသည်။ထိုအခန်းထဲတွင်...သင်နှင့်အတူ မြွေသုံးကောင်ရှိနေပါသည်။ထိုသုံးကောင်အနက်. သင်သည် တစ်ကောင်တည်းကိုသာ မဖြစ်မနေသတ်ရမည်ဆိုပါက မည်သည့်အကောင်ကိုသတ်မည်နည်း။
မှတ်ချက်။ ။ အဖြေကိုနောက်မှပြောပြမယ်နော်
သူသည် မလုပ်ခင်မှာလည်း သေချာစဉ်းစားပြီးမှလုပ်သလို၊ လုပ်ပြီးရင်လည်းသူ့ရဲ့ လူမှုရေး/အချစ်ရေး/အိမ်ထောင်ရေးကသာယာတတ်ပါတယ်တဲ့။
သူကတော့ စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ သိပ်မစဉ်းစားဘဲ လက်ရှိပြသနာကို အမြန်ဖြေရှင်းတတ်တဲ့စိတ်မြန်လက်မြန်လူပါ။
ဒါပေမယ့် သူ့ဘ၀က သူ့ကံပေါ်မှာဘဲ အမြဲမူတည်နေတတ်သူပါလို့ဆိုပါတယ်။
အားလုံးအဖြေလေးတွေကို ကျေနပ်ကြပါစေ..။ဒါ..ဆဂိပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ သူများဆီကကြားတာလေးကို အပျော်သဘောလေး တင်ပေးတာပါ။ မှန်ချင်မှလည်းမှန်မှာပါ။
လူတိုင်းက သူ့ဘ၀နဲ့သူ. သူ့ကံနဲ့သူ လာပြီးသားပါ။
မှတ်ချက်။ ။ စိတ်ဝင်တစားဖြေပေးကြပါသော သူငယ်ချင်းများကို ဆဂိ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သြော် ဆဂိ အမေးခံရတုန်းကဘာဖြေလိုက်လဲဆိုတာလေး ပြောလိုက်ပါအုံးမယ်။
ဆဂိ က မျက်နှာကျက်ကမြွေကို သတ်ပါမယ်လိုို့ မေးခွန်းဆုံးတာနဲ့တန်းဖြေထဲ့လိုက်တာ ..ဟားဟား။
Posted by ယူဆဂိ at Wednesday, August 01, 20077comment